Tutorial: Astro ဂိမ်း A50 ကြိုးမဲ့နားကြပ် Up ကိုချိန်ညှိခြင်း
Game consoles Installing & အဆင့်မြှင့်
တစ်ဦး Astro ဂိမ်း A50 ကြိုးမဲ့နားကြပ် Set Up လုပ်နည်း
by ဂျေဆန် Hidalgo
ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်သင်နေတဲ့အမှတ်တံဆိပ်-ရိုက်တာအသစ်က Astro A50 ကြိုးမဲ့ဂိမ်းနားကြပ်တယ်။
အဆိုပါ A50 အဆိုပါကျော်နေတဲ့ကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ် Astro A30 ကျနော်တို့မတိုင်မီပြန်လည်သုံးသပ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်လည်း uninitiated အထိသတ်မှတ်ထားဖို့ခြိမ်းခြောက်ပုံပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လမ်းတစ်လျှောက် niggles ၏စုံတွဲတစ်တွဲသို့ run ဖို့ဖြစ်နိုင်သော်လည်းကံကောင်းထောက်မစွာ, ကတက်လာပြီနှင့်အပြေး, ခက်လွန်းတကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဤတွင် Astro ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဂိမ်းနားကြပ်ကို set up ဖို့ဘယ်လိုပေါ်နေတဲ့ခြေလှမ်း-by-step လမ်းညွှန်ပါတယ်။
တစ် 2nd-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ A50 ဂိမ်းနားကြပ်ချိတ်တွဲ
ဂျေဆန် Hidalgo © image
device ကိုလုပ်ဆောင်ပုံကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား? အဆိုပါငါ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ထုတ်စစ်ဆေး Xbox One တွင်အဘို့ဒုတိယမျိုးဆက် Astro A50 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး2ကြိုးမဲ့နားကြပ် ငါသည်ဤသင်ခန်းစာအတွက်သုံးကားအဘယ်သို့သော။ စကားမစပ်တဲ့ Xbox One မူကွဲအမှန်တကယ်အဖြစ်ကောင်းစွာနဲ့အခြား consoles စနဲ့ PC နှင့်အတူသုံးနိုင်တယ်။ အခြားစနစ်များနှင့်အတူကသုံးစွဲဖို့, ငါ့ထုတ်စစ်ဆေး PS4, PS3, Xbox 360, PC နဲ့ Mac အတွက် Astro A50 သင်ခန်းစာ ။
ကြောင်းမှတ်စုတွင်, ရဲ့ Xbox One မှာအတူ Astro A50 ကို set up ဖို့ဘယ်လိုနှင့်အတူစတင်ကြကုန်အံ့။
အဆိုပါ Xbox One မှာပေါ် Astro A50 ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို: Controller Setup ကို
သင် A50 ရဲ့ Xbox One မှာဗားရှင်းတယ်ဆိုရင်, သင်တော်တော်များများသင်လိုအပ်သမျှကိုရှိသည်။ ဒီမှာသော့တကယ်ပဲ, အ Xbox One တွင်ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောအခြားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဟက်ဆက်များဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သုံးစွဲဖို့တစ်နာကျင်မှုစေသည်ဘယ်အရာကိုလည်းအခြား A50s ကနေပျောက်ဆုံးရဲ့အဘယ်အရာကိုအခြေခံသည်နှင့်သော Xbox One မှာချက်တင် cable ကိုဖြစ်ပါသည် PDP Afterglow Prismatic ဥပမာ။
သင်ပြုချင်ပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးအရာသေချာသင့် Xbox One console နဲ့ controller ကိုနှစ်ဦးစလုံး updated နေကြသည်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မဥပမာပထမဦးဆုံးမှာအဆုံးစွန်သောမလုပ်ခဲ့ဘူး, ငါ့ A50 အလုပ်လုပ်မခံခဲ့ရအဘယ်ကြောင့်အံ့သြခဲ့ပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်သင်ကအပ်ဒိတ်လုပ်ပြီးသင်အသုံးပြုနေတဲ့အပေါ်စီစဉ်ထားသည်အခြား Xbox One မှာ controller ကိုနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဖို့ USB ကြိုးမှတဆင့် Xbox One မှာရန်သင့် controller ကိုချိတ်ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Cable ကို Setup ကို: အ Xbox One မှာပေါ် Astro A50 ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
အတိုင်းပြုင့်တပြိုင်နက်, ပါဝင်သည် microUSB / USB မှကေဘယ်လ်ကြိုးတဦးယူနှင့် MixAmp TX နှင့် Xbox One မှာနောက်ကွယ်ကကို USB ခြမ်းနောက်ကွယ်မှ "PWR သို့" slot ကစ microUSB အဆုံး plug ။
ထိုအခါ TOSlink Optical Cable ကို ယူ. "Opt IN" (မရက "ဖယ်ထုတ်) (ပု HDMI slot နှစ်ခုအကြား) က Xbox One တွင်နောက်ကွယ်မှ optical cable ကို slot ကစ MixAmp ၏ slot ကနှင့်အခြားဘက်ခြမ်းသို့တဦးတည်းဘေးထွက် plug ။ အထိုင်အတွက် Opt ပထမဦးဆုံးမှာအဖုံးရှိတယ်ဒါကြောင့်ထဲကယူပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင် optical cable ကိုအကြံပေးချက်များအပေါ်အဖုံးထဲကယူမှဒါမှမဟုတ်သူတို့အရပ်သို့ဖမ်းယူမည်မဟုတ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
သင် MixAmp ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့နားကြပ်ကိုအားသွင်းချင်လျှင်, MixAmp ၏နောက်ကျောမှအခြား microUSB / USB ကြိုး၏ USB အဆုံး၌ plug သင်နားကြပ်ဖို့ microUSB အဆုံး၌ plugging အားဖြင့် A50 ကိုအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Xbox One မှာပေါ် Astro A50 ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို: Xbox One မှာ Settings များ
တစ်ချိန်ကပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏နားကြပ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့, လက်ဝဲဘက်ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် MixAmp ကိုဖွင့်ပြီးတော့, သင့် Xbox One တွင်ဖွင့်။ ဒါကြောင့်ဖွင့်မထားဘူးဆိုရင်, သင်ပထမဦးဆုံးကအားသွင်းဖို့မလိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ ပါဝါခလုတ်ကိုကိုင်ထားအမှန်တကယ် MixAmp နှင့်နားကြပ်ပြီးသား Pre-တွဲများမှာကတည်းကသင်ပြုရန်ရှိသည်မပြုသင့်ရာတွဲဖက်မှု, စတင်။ ဒါကြောင့်လည်းအဖြူ flashes တိုင်အောင်ထို့နောက်နားကြပ်ပေါ်ပါဝါခလုတ်ကိုအဖြူ flashes သည်အထိဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ပထမဦးဆုံး MixAmp အပေါ်ပါဝါခလုတ်ကိုကိုင်ထားပါ။ သူတို့လက်လာတာကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အဖြူနေဖို့ပြီးတာနဲ့တွဲဖက်မှုပြုမိသည်။
အဆိုပါ Xbox One မှာတွင်, "Settings" ကိုပြီးတော့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Display ကို & အသံ။ " သင် "Bitstream Format ကို" ကောက်နဲ့မှပြောင်းလဲပစ်ချင်ပါလိမ့်မယ် "Dolby ဒီဂျစ်တယ်လ်။ " ဒီ A50 အမြန်စတင်လက်စွဲဒီအပိုငျးအပေါ်လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဒါပေမယ့် "Bitstream Format ကို" ထွက် grayed နှင့်နှိပ်လိုက်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလျှင်ထွက်မှမထင်မှတ်ကြပါဘူး။ ရုံပိုင်ခွင့်ကအထက် "Optical အသံ" ကိုသွားပါနှင့် "Bitstream ထွက်" ကောက်ခြင်းနှင့်သင်တို့ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် "Bitstream Format ကို။ "
Controller Chat ကို Cable ကို: အ Xbox One မှာပေါ် Astro A50 ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
ဒါကြောင့်အရပ်သို့လက်သည်မှီတိုင်အောင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့, အ, Xbox Controller ၏အောက်ဆုံးအပေါ် Xbox One မှာ Chat ကို Cable ကို plug ။ ညာဘက်မိုက်ခရိုဖုန်း earcup အောက်က Xbox Live cable ကို port ကိုအခြားအဆုံးကိုချိတ်ဆက်လျက်သင်တို့ရှိသမျှအစုံပါပဲ။ သငျသညျနဲ့ controller ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ကိစ္စတွင်အတွက်ချက်တင် cable ကိုထုတ်ယူရန်, cable ကိုအပေါ်ဆွဲမပါဘူး။ အဲဒီအစားသူ့ရဲ့နောက်ကျောအပေါ် controller ကိုလှန်နှင့် connector ကို၏ပလပ်စတစ်အိမ်ရာထိပ်အစွန်းပေါ်မှာချုပ်ကိုင်ထားရအောက်ဖက်တွန်း။
အခြား consoles စသို့မဟုတ် PC နဲ့ A50 ကိုသုံးပါ "PS4, PS3, Xbox 360 နဲ့ PC ပေါ်တွင် Astro A50 အသုံးပြုခြင်း။ " ငါ၏အသင်ခန်းစာစစ်ဆေးခရီးဆောင်အသံကိရိယာများအကြောင်းပိုပြီးဆောင်းပါးများနှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုအတွက်, နားကြပ်နှင့် Speakers အချက်အချာသွားရောက်
PS Vita Download လုပ်နိုင် Apps ကပ
PSP များအတွက် Skype ကို Install လုပ်ပြီးအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကလေးများ၏ကောင်းကျိုးများသူတို့ရဲ့ PSPs Hack
PSP Downloads များအတွက် Sony ကမီဒီယာ Go ကို Set Up လုပ်နည်း
5 အကြောင်းရင်း Sony ရဲ့ UMD Format ကိုထွန်းကားဘယ်တော့မှမ
ငါဘယ်လို PSP Firmware ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်သလား?
ဖမ်ဝဲဗားရှင်းတစ် PSP ရှိထားသည်ဘယ်အထဲက Find လုပ်နည်း
'' အဘယ်သူမျှမသုံးခွင့်ဆော့ဝဲဒေတာများ '' မှားယွင်းနေသည်ကိုပြုပြင်တာတွေ
USB က 3.0 ဆိုတာဘာလဲ
သင်ကအခမဲ့ WordPress.com ဆိုက်ကိုအပေါ်အဓိကအကြောင်းအရာ Customize နိုင်သလား?
ဒစ်ဂျစ်တယ်တေးဂီတကိုဖန်တီးသည်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်း Apps ကပ
က Android ကို TV အွန်လိုင်းလွှပလက်ဖောင်းအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
အဆိုပါ 8 အကောင်းဆုံးနားကြပ် 2018 ခုနှစ် Buy မှ Beats
Dell ရဲ့ E525w အရောင်ယဉ်ကျေးမှုစုံစာပေစင်တာပရင်တာ
WinZip5Mac ကို: အ Mac အတွက်တစ်ဦးကလူကြိုက်များတဲ့ဇစ် Compression ကို Tool ကို
Yahoo! Filter Outlook နဲ့တစ်ဦးအထူး Folder ကိုမှ Mail ကိုပမ်
နွေရာသီခရီးသွားဘို့ပြီးပြည့်စုံသော Are ဒါကအကောင်းဆုံး Apps ကပ 21
Gateway မှာ NV77H05u 17.3 လက်မအရွယ် Desktop ကိုအစားထိုး Laptop ကို PC မှာ
Dell က Inspiron 660 Desktop ကို PC မှာ
1080p vs 1080i - အလားတူနှင့်ကွာခြားချက်များ
2018 အဘို့ 30 အကောင်းဆုံး Valentine Day ကို E-Card ကိုဆိုဒ်များ
အဘယ်ကြောင့် Do ပြည်သူ့ Root Android မှာဖုန်း?
IPhone6& iPhone ကို 6S အမျိုးမျိုး Are6Key ကိုနည်းလမ်းများ
ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းအတွက် Proximity အကြောင်းလေ့လာပါ
Freemium ကဘာလဲ? နှင့်အခမဲ့-to-Play စတကယ်တော့ကောင်းမွန်သောဂိမ်းအဘို့အလား?
Outlook Express ကိုအခမဲ့ Windows Live, Hotmail သုံးစွဲနည်းကိုဘယ်လို
အဲဒီ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Apps ကပပထမဦးစွာ Download
IOS ကို 11 သည် 12 အကောင်းဆုံး ARKit Apps ကပ